ပင်လုံသို့ တကျော့ပြန်ခရီး | Just Another WordPress Blog
ပင်လုံ ခေတ်ဟာ တိုတောင်းလှတဲ့ကာလလေးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ (၂၁) ရာစုခေတ် အလွန်အထိ ခေတ်မီနေဦးမည့်/ ခေတ်မီနေအုန်းမဲ့ သစ္စာတရားတွေ နဲ့ရစ်ခွေထုံးဖွဲ့ နေ ခဲ့တာကို ဒီနေ့ ကျနော်တို့ ပြန်လည် တွေ့ရှိ လာ ကြပါ ပြီ။ ကျနော်တို့ ဟာ အတိတ်ရဲ့ ပင်လုံ ဆိုတဲ့ အလှပဆုံး တိုတောင်းလှတဲ့ကာလလေး ကို အလေးအနက် ဦးညွတ် အလေးပြုရင်း၊ အဲဒီ ကာလတိုကလေးကို ပဲ လူမျိုး ပေါင်းစုံ မျိုးဆက်သစ် ပြည်သူ တွေရဲ့ ထာဝရ တောက်ပြောင်တဲ့ အနာဂတ် ဘဝသစ်တွေ အဖြစ် ပြန်လည် ဖေါ်ထုတ် ပြီး ပြန်လည် တည်ဆောက်ကြ ဖို့အတွက် ရှေ့ကို မနားတမ်း တိုးရွှေ့ ကြရမှာ ဖြစ် တယ်။ တကြိမ်ထဲမှာ ရွာကလေးတစ်ရွာလိုသာဖြစ်သွားတော့မဲ့ ကမ္ဘာ အဝှမ်း မှာ အချိန်နဲ့ အညီ ဝေစည် ဖွံ့ဖြိုး နေတဲ့ (၂၁) ရာစု ကွန်ယက် လူ့အဖွဲ့ အစည်း နဲ့ သဟဇာတ အချိတ်အဆက် မိအောင်လုပ်ဖို့ စိန်ခေါ်မှု တွေ ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ဆင် ကြ ရမှာ ဖြစ်တယ်။
We have rediscovered today that the short lived Panglong period of our past is enshrined with truth, that could have last long beyond the 21st. Century. Let us solemly honour this brief, yet most beautiful Panlong era of our past and continuously move forward to restore and rebuild it into the promise of the future generations of all nationalities and to simultaneously prepare for the new challenges to connect and integrate into the 21st. Century network society ever emerging across the globalized world.
ပင်လုံပြည်ထောင်စု သမိုင်း ၏ အစ နိဒါန်း
ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်ကြီးအပြီး ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံကို မဖြစ်မနေ လွတ်လပ်ရေးပေးရမည့် အချိန် ကျရောက်လာခဲ့သည်တွင် ထိုစဉ်က နယ်စပ်ဒေသ Frontier Areas ဟုခေါ်ဆိုသော ရှမ်းပြည်၊ ကချင်ပြည် နှင့် ချင်းပြည် တို့ ကို ချန်လှပ် ထားကာ British Burma အ တွင်း မှ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ကရင် တို့ပါဝင်သည့် Ministrial Burma ခေါ် Burma Proper ကိုသာကွက်၍ လွတ်လပ်ရေးပေးရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ အ ကြောင်းပြချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်း ပိုက် စဉ် က ယင်း Frontier Areas တို့သည် ဗမာအင်ပါယာတွင်မပါဝင်ခဲ့၊ သီးခြား လွတ်လပ်စွာ တည်ရှိခဲ့ ကြသည့် ဒေသ များ ဖြစ်သဖြင့် သီးခြားစီ သိမ်းပိုက်ခဲ့ရပြီး စစ်ပြေ ငြိမ်းရေး စာချုပ်များကိုလည်း သီးခြားစီ ချုပ်ဆိုကာ ဗြိတိသျှအင်ပါယာလက် အောက် သို့သွတ်သွင်းခဲ့ရသည်။ လွတ်လပ်ရေး ပေး လျင်လည်း Frontier Areas များကိုချန်လှပ်ကာ သီးခြားစီ သာပေးလိုသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလည်း ထိုသို့သီးခြားစီပေးလျင်လည်း ယူကောင်းယူရမည် သာဖြစ်ကြောင်း ထိုစဉ် က ရန်ကုန်သို့ လျှိ့ဝှက်စွာ လာရောက် ဆွေး နွေးကြ သည့် ရှမ်းလူငယ် ခေါင်းဆောင်များ နှင့် တွေ့ဆုံပွဲ တွင် ပြောဆိုသွားရာ ဦးထွန်းမြင့် (တောင်ကြီး) အပါ အ ဝင် ထိုစဉ်ကာလ ရှမ်းလူ ငယ် ခေါင်းဆောင် များ က “Frontier Areas များမပါဝင်သည့် လွတ်လပ်ရေး သည် စစ်မှန်သော လွတ် လပ် ရေး မဟုတ်ကြောင်း” ဗိုလ်ချုပ် အောင် ဆန်းအား ဖြောင်းဖျ စည်းရုံးခဲ့ သဖြင့် ထိုတွေ့ဆုံပွဲ နောက်ပိုင်းတွင် လွတ်လပ်ရေး ကို Frontier Areas များ နှင့် တပြိုင်နက်ထည်း ရယူရန် သန္နိဌာန်ချကာ တောင်း ဆိုခဲ့သည်။ အောင်ဆန်း အက်တလီ စာချုပ် ချုပ် ဆို ရာတွင် ဗြိတိသျှ တို့က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား Frontier Areas များမှ ခေါင်း ဆောင် များ ၏သဘောတူညီချက်ကိုရယူ နိုင်မှ သာလျင် မြန်မာ နိုင်ငံကို လွတ် လပ် ရေးပေး ရာတွင် Frontier Areas များ နှင့် အတူ တပြိုင်နက် တည်း ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့၏ သဘောထား ကို ပြော ကြား ခဲ့ရာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကလည်း ထိုစိန်ခေါ် ချက်ကို စိုးစဉ်းမျှ နောက်မတွန့်ပဲလက်ခံခဲ့သည်။ ထိုစဉ် ကာလ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်း နှင့် အတူ လန်ဒန် သို့သွားရောက်ခဲ့ကြသည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ် ထဲမှ အချို့သည် ဤအချက်ကို အပြင်းအထန် ကန့် ကွက် ကာ အောင်ဆန်း အက်တလီစာချုပ်ကိုပင် ပါဝင် လက်မှတ်ရေး ထိုးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့ကြသည်။ လွတ်လပ် ရေး ကိုအငန်းမရ လိုချင်ပြီး စားလည်း ဒီစိတ် အိပ်လည်းဒီစိတ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ နိုင်ငံရေး အမျှော် အမြင် ကို ညဏ်မမီ နိုင် ခဲ့ ကြပေ။
အမှန်မှာ ဗြိတိသျှတို့၏ အလိုအရ Frontier Areas များသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် နိုင်သော ဒေသများ အဆင့် တွင် မရှိ်သေး ဟူသော အကြောင်းပြချက် ဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ ၏ ထိုစဉ်ကာလ ကိုလိုနီစနစ်များဖျက်သိမ်းရေး စီမံချက် အောက်တွင် ဖွဲ့စည်းမည့် ကုလ သမဂ္ဂ အစောင့် ရှောက်ခံ ဒေသများ UN Trust Territories အဖြစ် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ၏ Trusteeship Council ၏ ကြီးကြပ်မှု အောက်တွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်နိုင်သည့် အဆင့် သို့ ရောက်လာသည် အထိ အချိန် အကန့် အသတ်တခုအထိ ထားရှိပြီး အချိန်တန်လျင် သီးခြားလွတ်လပ်ရေး ကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ် အရ Frontier Areas များသည် အချိန် တန် ၍ ဆန္ဒရှိလျင် နီးစပ်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ ဝင် နိုင်ငံ တခုခု (ဥပမာ India, Burma) ၏ ပြည်နယ်များ အဖြစ် ပူးပေါင်းသွားရန် လည်း အလားအလာ ရှိခဲ့ သည်။ ယနေ့ အချိန်အထိ အများ အမြင်မှားယွင်းစွာ ယူဆခဲ့ကြ သကဲ့သို့ ဗြိတိသျှကိုလိုနီ လက်အောက်တွင် ဆက်လက် ထား ရှိရန်မဟုတ်ပေ။ ထိုစဉ်ကာလ ကုလသမဂ္ဂ ၏ အဓိကတာဝန်ကြီး တရပ်မှာ လည်း ကမ္ဘာတဝှမ်း ကိုလိုနီစနစ် များ ဖျက်သိမ်းရေး decolonization ဖြစ်ပြီး ဗြိတိသျှ တို့ က Frontier Areas များ ကို မိမိတို့၏ ကိုလိုနီလက်အောက်တွင် ဆက်လက်ထားရှိလိုသည့်တိုင်အောင် ထိုစဉ်ကာလ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းနှင့် နိုင်ငံရေး ရေချိန် အရ လုံးဝ လက်ခံ၍ မရသော အခြေ အနေ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ Frontier Areas များ ကို လွတ်လပ်ရေး မပေးပဲချန်လှပ်ထားခဲ့ဦးတော့၊ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ လက်အောက်တွင် ထားရှိရန် မဖြစ်နိုင်၊ UN Trust Territories များ အဖြစ် အိမ်နီးချင်း UN Trust Council အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတခုခု ၏ ယာယီ အစောင့်လျောက်ခံ ဒေသ အဖြစ် သာထားရ မည် ဖြစ်သည်။ ဤ သို့သော နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း ကို world class leader တဦးဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ကောင်းမွန်စွာ နားလည်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ ၏ စီမံချက်အရ UN Trusteeship Territories တွင် ထားရှိရမည့် ကမ္ဘာ့ကိုလိုနီ နယ်မြေ များမှာ non self-governing territories ခေါ် မိမိကိုယ်ကို မအုပ်ချုပ်နိုင်သေးသော ခေတ်နောက်ကျန်ခဲ့သည့် ကိုလိုနီဒေသ များ ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း သည် တောင်တန်းဒေသ များ အား နိုင်ငံရေး အရ ခေတ်နောက်ကျ သော ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်း ခွင့် နှင့် မထိုက်တန်သေးသော၊ မိမိတို့ ဒေသကိုကိုယ်တိုင်မအုပ်ချုပ်နိုင်သေးသော ကိုယ်ပိုင်အစိုးရ နှင့် မထိုက်တန် သေး သော ဒေသများအဖြစ် လည်း မမြင်ခဲ့ပါ။ ခေတ်နောက်ကျသော ဒေသများ ဟူ၍လည်း မမြင်ခဲ့ပါ။ အထင်သေးအမြင်သေးခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပါ။ “For sixty years the conditions of the so called backward tribes administered by the British authorities without Burmese aid, have remained without improvement. The delegation do not held the view that they are politically backward and still incapable of self government, but if such is the view of His Majesty‘s government the delegation maintain that no government outside Burma should have any claim in the privilege of trusteeship over these areas.” အထက်ပါတို့မှာ အောင်ဆန်း အက်တလီ စာချုပ်ချုပ် ဆိုရာတွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း တင်သွင်း ခဲ့ သော General Statement of Burma Delegation to London-January 1947 စတမ်းပါ The Frontier Areas ခေါင်းစဉ် အောက်တွင် United Nations Charter, Chapter XII, Article 73, the principles that continue to guide United Nations decolonization efforts, including respect for self-determination of all peoples ကိုကိုးကား ကာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဖေါ်ပြခဲ့ သည့် အချက် များ ဖြစ်သည်။ (မဟာသရေစည် သူ ဦးဖေခင်၏ ကိုယ်တွေ့ ပင်လုံ ကိုရှုပါ။) [Emphasis by the author] ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဆိုလိုသည်မှာ ဗမာ အကူအညီမပါပဲ ဗြိတိသျှတို့ က သီးခြား အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် Fronatier Areas များအား နိုင်ငံရေး အရ ခေတ်နောက်ကျန်ခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင် မအုပ်ချုပ်နိုင်သည့် အဆင့် တွင် ရှိနေသေးသောဒေသများအဖြစ်မမြင်ကြောင်း၊ အကယ်၍ ဗြိတိသျှတို့ ကထိုသို့ ထင်မြင်ယူဆကာ UN Trusteeship ခေါ် ကုလသမဂ္ဂ အစောင့်ရှောက်ခံဒေသအဖြစ်ချန်လှပ်ထားခဲ့မည်ဆိုပါကလည်း ဗမာပြည်မှအပမည်သည့် နိုင်ငံကမျှ ထိုဒေသများ ကို UN Trusteeship စီမံချက်အောက်တွင် ဆက်လက်စောင့်ရှောက်ခွင့် အခွင့်ထူးကို မပိုင်ဆိုင်သင့်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤဒေသတို့သည် အမှန်တကယ်တွင်မူ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှု မရှိသော non self-governing territories များ မဟုတ်မူပဲ၊ မိမိတို့ ဒေသ သမိုင်း ဖြစ်စဉ် အရ စော်ဘွားများ၊ ဒူးဝါးများ၊ တိုက်သူကြီးများ အုပ်ချုပ်ခဲ့ သည့် သမိုင်း အစဉ်အလာအားဖြင့် ကိုယ် ပိုင်အုပ်ချုပ်သည့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်များ ကျင့် သုံးခဲ့သည့် ဒေသများဖြစ်ပေသည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် အခြား ဖြစ်နိုင်ခြေ ရွေးချယ်စရာ Option အမျိုးမျိုး ကိုကြိုတင်ထည့်သွင်း စဉ်းစားထားနှင့်ပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လည်း အကယ်၍ ဗြိတိသျှတို့ က ယင်း Frontier Areas များ ကို non-selfgoverning territories များအဖြစ်ဇွတ်သတ်မှတ်ကာ UN Trusteeship Council လက်အောက်တွင် မဖြစ်မနေ ထားရှိမည် ဆိုပါက လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံဖြစ်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံ မှအပ မည်သည့် နိုင်ငံ အစိုးရ ကမျှ ယင်း Frontier Areas များ ကို ယာယီ စောင့်ရှောက်ရန် trusteeship အခွင့်အရေး မရှိသင့် ကြောင်း […. but if such is the view of His Majesty‘s government the delegation maintain that no government outside Burma should have any claim in the privilege of trusteeship over these areas] သူ၏ စာတမ်းတွင် ဖေါ်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “ [မဟာသရေစည်သူ ဦးဖေခင်၏ ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ စာမျက်နှာ (၆ဂ)။]
[International Trusteeship System. In 1945, under Chapter XII of the Charter, the United Nations established the International Trusteeship System for the supervision of Trust Territories placed under it by individual agreements with the States administering them. Under Article 77 of the Charter, the Trusteeship System applied to Territories held under Mandates established by the League of Nations after the First World War; Territories detached from “enemy States” asaresult of the Second World War; Territories voluntarily placed under the System by States responsible for their administration. The basic objective of the System was to promote the political, economic and social advancement of the Territories and their development towards self-government and self-determination. It also encouraged respect for human rights and fundamental freedoms and recognition of the interdependence of peoples of the world.] (http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/trust.htm).
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ အလိုအရ Frontier Areas များသည် လွတ်လပ်ရေး မယူသေးပဲ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရနယ်မြေ self-governing territory အဆင့် ကို ရောက်အောင် UN Trust Territories များအဖြစ် အချိန်ပိုင်းတခု အထိ ယာယီ အစောင့်ရှောက်ခံ ဒေသများ အဖြစ်ထားရှိရန် မလိုအပ်ပေ၊ ထိုဒေသ များ သည် အစကတည်းက သမိုင်းအဆက်ဆက် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်နေ ခဲ့ကြသောဒေသများ ဖြစ်သဖြင့် ဗမာပြည်နှင့် ပူးပေါင်း ကာ တချက် တည်း လွတ်လပ်ရေး ကို အရယူ ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ပိုင် အုပ် ချုပ်ခွင့် ရှိသော ပြည်ထောင်စုဝင် ဒေသများ အဖြစ် ချက်ခြင်း ရ နိုင် သည်။ နိုင်ငံရေး အမျှော်အမြင်ကြီးမားသော ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် ဤသို့ဖြင့် Frontier Areas များ၏ နောက်ခံသမိုင်း ကို အသိအမှတ်ပြုကာ ချင်း၊ရှမ်း၊ ကချင် ခေါင်း ဆောင် တို့ ၏ ယုံကြည်မှု ကို ရယူပြီး ပင်လုံစာချုပ်ကို ရေးထိုး ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့ သည် အပြင် တန်းတူသော လွတ်လပ်သော ပြည်ထောင် စု အဖွဲ့ဝင် များ အဖြစ် လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတို့အတွက် လွတ်လပ် ရေး ကိုပါ အတူတကွ အရ ယူနိုင်ခဲ့သည်။ [မှတ်ချက်။ ထိုစဉ်ကာလ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် ကမ္ဘာ့ ကုလ သမဂ္ဂ က Trust Territories နယ်မြေ (၁၁) ခု သတ်မှတ်ခဲ့ရာ ၄င်း နယ်မြေ များအား ယခင် ကိုလိုနီနယ်မြေများအဖြစ်မှ အချုပ်အခြာအာဏာ ပိုင်နိုင်ငံ များ အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းသည့် ကာလ အတွင်း ထိုဒေသများ၏ အုပ်ချုပ်ရေး ကိုကြီးကြပ် ရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် UN Trust Council ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံး ကျန်ရှိနေသေး သော Palau ကျွန်းငယ် လွတ်လပ်ရေး ကြေညာနိုင်ခဲ့ သည့် အချိန် မှ စ၍ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ Palau ၏ အုပ်ချုပ်ရေး ကို အမေရိကန် ပြည် ထောင်စုမှ UN Trusteeship Agreement အရတာဝန်ယူခဲ့ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ၏ ရလဒ်အဖြစ် ၁၉၉၄ ခုနစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးကြေညာကာ ကုလသမဂ္ဂ ၏ ၁ဂ၅ ခုမြောက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုဖြစ်လာသည်။ ကျွန်းနိုင်ငံငယ် ကလေး ဖြစ်သော Republic of Palau သည် ဧရိယာ အားဖြင့် ၁၁ရ စတုရန်း မိုင်ကျယ်ဝန်းပြီး ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ နှစ်သောင်းကျော်ရှိသည်။ ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း အားဖြင့် ၂၃၂.၂ စတုရန်းမိုင်ရှိပြီး ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ လေးသန်း ကျော်ရှိသော ရန်ကုန်မြို့တော် ထက်ပင်သေးငယ်သော ကျွန်းနိုင်ငံတခုဖြစ်သည်။ Frontier Areas များသည်လည်း Palau သမ္မတ နိုင်ငံကဲ့သို့ UN Trusteeship အစီအစဉ်အောက်တွင် အချိန် ပိုင်း အကန့်အသတ်တခု အထိ နေထိုင် ပြီး အချိန်တန်သည့် အခါ သီးခြား အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် သမ္မတ နိုင်ငံ များ အဖြစ်ကြေညာရန်၎င်း၊ သို့တည်းမဟုတ် ဆန္ဒရှိပါက မြန်မာ ပြည်ထောင်စု နှင့်ပူးပေါင်းရန်၎င်း အခွင့် အရေးရှိခဲ့ သော် လည်း၊ လွတ်လပ်ရေး ကို အလျင်အမြန် ရယူလိုခြင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အားယုံကြည်လေးစားခြင်း၊ ဗိုလ်ချုပ် ကလည်း မိမိတို့၏ သမိုင်း ကြောင်း အရ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည့် ဒေသ များ self-governing territories များ ဖြစ်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ဗမာပြည်မနှင့်ပူးပေါင်းပါကလည်း မိမိတို့ ၏ နဂိုရှိရင်းစွဲ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်းအာဏာများ လက်လွတ် ဆုံးရှုံးစရာမရှိ၊ တန်းတူသော၊ လွတ်လပ်သော ပြည်ထောင်စု အောက်တွင် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ် ပိုင် ပြဌာန်းခွင့် ရှိသော ပြည်ထောင်စုဝင် ပြည် နယ် များ အဆင့် ကို ချက်ခြင်း လက် ငင်းရရှိကြမည်ဟုယုံကြည်ကြခြင်း စသည်တို့ကြေင့် ပင်လုံ စာချုပ်ကို သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။]
ဤသည် တို့မှာ စစ်မှန်သော ပင်လုံပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသစ် မလွဲမသွေ ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ ကိုလိုနီစနစ်များ ဖျက်သိမ်းရေး သမိုင်း နှင့် ယှဉ်ပြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ပင်လုံ သမိုင်း ၏ ပကတိ အစ နိဒါန်းများဖြစ်၏။ တနည်းအားဖြင့် ပင်လုံသမိုင်း သည် ကမ္ဘာ အဝှမ်း decolonization ခေါ် ကိုလိုနီစနစ် ဖျက်သိမ်းရေး သမိုင်း နှင့် ခွဲခြား၍ မရ၊ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညဉ် စာချုပ် နှင့် အညီ ကမ္ဘာ့ လူမျိုး အသီးသီး တို့၏ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းပိုင်ခွင့် ကိုလေးစားရေး [the principles that continue to guide United Nations decolonization efforts, including respect for self-determination of all peoples] ဟူသည့် အခြေခံမူ နှင့်လည်းခွဲခြား၍မရသော အခိုင်အမာရှိသည့် သမိုင်း တခု ဖြစ်ပေသည်။ တနည်းအားဖြင့် ထိုကာလ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေးရေစီးကြောင့် အရသော်၎င်း၊ Frontier Areas မှ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် တို့နှင့် အမြင်ခြင်းတထပ်တည်း ဖြစ်ခဲ့သည့် ဗမာမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ ကြီးမားသော နိုင်ငံရေး အမျှော်အမြင် အရသော်၎င်း ကမ္ဘာ့ ဤဒေသတွင် လူမျိုးတမျိုးနှင့် တမျိုး နိုင်ထက်စီးနင်းပြုကျင့်သည့် internal colony ခေါ် ပြည်တွင်း ကိုလိုနီ စနစ်မျိုး၊ တမင်းတနိုင်ငံစနစ်မျိုး ပေါ်ထွန်း လာစရာ အကြောင်း တစုံတရာမရှိခဲ့ပေ။
Posted in ပင်လုံဆောင်းပါးများ
« FREEDOM HOUSE ရဲ့ electoral democracy ညွှန်းကိန်း။
ပင်လုံ ပြည်ထောင်စုကြီး ကိုစတင် ထူထောင်ခြင်း »